Soo -saareyaasha Alaabta Dhameysta | Shiinaha Dhameystayaasha Alaab -qeybiyeyaasha & Warshadda
Chlorella waa mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn algae ee adduunka oo dhan. Waxay leedahay maadada chlorophyll ee ugu sareysa warshad kasta oo la yaqaan tanina waxay siisaa chlorella midabkeeda cagaaran ee qoto dheer. Sidaa darteed chlorella ma aha oo kaliya mid gaar ah, laakiin sidoo kale waa mid aad u waarta.
Waxaan ugu yeernay Chlorella “Faytamiin badan oo Dabiici ah” maxaa yeelay waxay bixisaa faa'iidooyin caafimaad oo kala duwan. Chlorella waxaa ku hodansan chlorophyll iyo sidoo kale nafaqooyin kale oo aan tiro lahayn, taasoo la micno ah inay siyaabo kala duwan u bixin karto dheefaha caafimaadka.
Blue Spirulina waa magaca guud ee phycocyanin kaas oo ah budada buluuga ah ee nafaqada leh ee laga soo saaray algae cagaaran oo buluug ah. Spirulina oo buluug ah waa cunno aad u fiican iyo awood antioxidant. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay cunno aad u sarreeya maxaa yeelay waa nafaqo cufan oo aad u caafimaad badan adiga. Blue Spirulina waxay bixisaa taageero xasaanad waxayna weerartaa xagjiriinta xorta ah. Blue spirulina aad bay caan ugu tahay macaamiisheena vegan maxaa yeelay waa il gaar ah oo borotiinka vegan ah.